2017 March 14 « QEERROO
March 14, 2017 By Qeerroo in Oduu/News	1 Comment
RSWO – Bitooteessa 12, 2017 – Oduu fi dhaamsa RSWo dhageeffachuu ni jaalattanii??
Ummanni Oromoo saba guddaa, saba aadaa, seenaa fi duudhaa guddaa qabuudha. Ummanni kun biyya mataa isaa, biyya barootaaf irra jiraachaa ture ummata qabuudhasi. Biyya isaa keessaattis akkuma seenaan ragaa bahutti ummata sirna bulchiinsaa mataa isaa diriirsee ykn ijaarratee seeraa fi sirnaan, nagahaan wal bulchaa tureedha.Ummanni Oromoo dachee badhaatuu lafa facaasanii irraa hammaarratan, horanii irra yaasan qabu ta’unis dhugaa iafa jiruudha. Walumaa galatti ummanni Oromoo ummata aadaa, seenaa fi dhuudhaa akkasumas qabeenya ummamaa hammaramee hin dhumne qabudha jechuutu danda’ama. Continue reading →